Ngithenge iDrone entsha yamaklayenti ... futhi Kuyamangalisa | Martech Zone
Ngithenge i-Drone entsha yamaklayenti… futhi iyamangalisa
NgoLwesine, Januwari 9, 2020 NgoLwesine, Januwari 9, 2020 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa eyedlule, ngangiluleka usonkontileka omkhulu wophahla ngokutholakala kwabo online. Siphinde sakha futhi salungisa indawo yabo, saqala umkhankaso wokudonsa oqhubekayo wokuthwebula izibuyekezo, futhi saqala ukushicilela amaphrojekthi abo ku-inthanethi. Into eyodwa ebingatholakali, noma kunjalo, kwakuyizithombe zangaphambi nangemva kwalezi zakhiwo.
Ngokungena ngemvume ohlelweni lwabo lokucaphuna nokuphathwa kwephrojekthi, ngikwazile ukubona ukuthi yiziphi izakhiwo ezivalayo nokuthi amaphrojekthi aqedwa nini. Ngemuva kokufunda ithoni yezibuyekezo online, ngithenge i- UDJI Mavic Pro drone.
Ngenkathi i-drone ithatha izithombe ezinhle futhi kulula ukundiza, bekubuhlungu impela ukusetha nokusebenza. Bekufanele ngingene ngemvume ku-DJI ngicabange uhlelo lokusebenza lwe-iPhone, ngixhume ifoni kusilawuli, futhi kubi… ukungena ngemvume kuzindiza zonke. Uma bengisesifundeni esivinjelwe, bekufanele futhi ngibhalise nendiza yami. Ngisebenzise i-drone amaphrojekthi angaba yishumi nambili ngabe sengiyithengisela iklayenti lapho ngiqeda isivumelwano nayo. Yidrone enhle, basayisebenzisa nanamuhla. Kwakungelula nje ukuyisebenzisa futhi ngangingenalo elinye iklayenti lapho kunengqondo khona.
Ukusheshisa unyaka futhi iMidwest Data Center yami ibivula ubuchwepheshe obusha isikhungo sedatha eFort Wayne, E-Indiana okubandakanya ihawu le-EMP. Kwase kuyisikhathi sokuthi ngithathe izibhamu ze-drone, ngakho ngathola abathwebuli bezithombe nabathwebuli bevidiyo esifundeni.
Izingcaphuno engizitholile ngomsebenzi zazibiza kakhulu… eziphansi kwaba ngama- $ 3,000 wokuthwebula ividiyo nezithombe zezindawo ezi-3 zenkampani. Ngokunikwa isikhathi sokushayela nokuncika kwesimo sezulu, lokho bekungeyona into yezinkanyezi… kepha bengingafuni ukuzitholela leyo mali yezindleko.
I-Autel Robotics EVO
Ngiphume ngafunda ezinye izibuyekezo ku-inthanethi ngathola ukuthi umdlali omusha emakethe ubekhuphuka ngokuthandwa, i- I-Autel Robotics EVO. Ngesikrini esakhelwe ngaphakathi kwisilawuli futhi asikho isidingo sokungena ngemvume, ngingavele ngikhiphe i-drone, ngiyindiza, futhi ngithathe amavidiyo nezithombe ebengizidinga. Inophahla oluphakeme ngokwanele ngakho-ke akukho kubhaliswa kwe-FAA noma ilayisense elidingekayo ukundiza. Akukho ukusetha, azikho izintambo zokuxhuma… vele uyivule bese uyandiza. Iyamangalisa… futhi empeleni ibibiza kancane kuneMavic Pro.
Imininingwane yomkhiqizo ye-drone:
Kuhlonyiswe ngaphambili i-EVO inikeza ikhamera enamandla kwi-3-axis eqinisa i-gimbal erekhoda ividiyo ku-4k resolution ifike kuzimele ezingama-60 ngomzuzwana futhi ijubane lokurekhoda lifike ku-100mbps ku-H.264 noma i-H.265 codec.
Kusetshenziswa i-real-glass optics i-EVO ithwebula izithombe ezinhle kuma-megapixels ayi-12 anebanga eliguqukayo lemininingwane eminingi nombala.
Izinhlelo ezihlanganisiwe zokubukwa kwamakhompiyutha zihlinzeka ngokugwema izithiyo phambili, ukuthola izithiyo ezingemuva nezinzwa ezingezansi zokufika okunembe kakhudlwana nezindiza zasendlini ezizinzile.
I-EVO inezikhathi zokundiza kufika kumizuzu engama-30 ngobubanzi bamamayela angu-4.3 (7KM). Ngokwengeziwe, i-EVO inikeza izici ezingaphumeleli ezikukwazisa uma ibhethri liphansi futhi sekuyisikhathi sokubuyela ekhaya.
I-EVO ifaka isilawuli esikude esigcina isikrini se-OLED esingu-3.3-intshi sikunikeze imininingwane yezindiza ebucayi noma okuphakelayo kwevidiyo ye-720p HD ekuvumela ukuthi ubone ukubuka kwekhamera ngaphandle kwesidingo sedivayisi yeselula.
Landa uhlelo lokusebenza lwamahhala lwe-Autel Explorer olutholakalela amadivayisi we-Apple iOS noma we-Android bese uxhuma kusilawuli kude bese uthola ukufinyelela kuzilungiselelo ezithuthuke kakhulu nezici zezindiza ezizimele njenge-Dynamic Track, Viewpoint, Orbit, i-VR yokubuka komuntu wokuqala nokuhlelwa kwemishini ye-Waypoint.
I-Evo ine-Micro SD slot yokudlulisa kalula amafayela.
Ngithengile amabhethri angeziwe nebhokisi elithambile lokuthwala i-drone. Isonga kahle futhi kulula ukuyiphatha.
Thenga i-Autel Robotic EVO Drone Bundle
Sibe nendlu evulekile esikhungweni esisha sedatha futhi ngathatha i-drone, ngathatha izithombe namavidiyo, zaphuma zizinhle. Umshicileli wendawo wayekhona futhi ngakwazi ukubathumelela amavidiyo ababewasebenzisa endabeni yabo yezindaba. Emasontweni ambalwa kamuva, olunye uhlelo lwezindaba lwaxoxisana nabanikazi lwafaka ne-video nayo. Futhi, ngilungiselele iwebhusayithi yabo, kufaka phakathi izithombe nevidiyo engaphakathi kuyo. Nazi izithombe:
Izikhungo zeLifeline Data Drone Shots
Kwakuyi- $ 1,000 enhle kunazo zonke engake ngazisebenzisa… sengivele ngithola imbuyiselo emangalisayo ekutshalweni kwezimali neklayenti elijabule kakhulu. Okuhle kunakho konke, ukuthi bekungadingi noma yimuphi umsebenzi ukuba usebenze nhlobo… funda nje imiyalo futhi uthatha isibhamu esifanele ngaphakathi kwemizuzu. Ngize ngawukhipha futhi ngawuhlola ngawuhambisa ngendiza usuka ebangeni… futhi wabuya kungakapheli mizuzu. Ngesinye isikhathi, ngayihambisela esihlahleni ngakwazi ukuyinyakazisa. Futhi, ngesinye isikhathi, ngayindizisela eceleni kwendlu… futhi ngokumangazayo ayizange ibe nomonakalo. (Hawu!)
Inothi eliseceleni: U-Autel umemezele uhlobo olusha sha lwale drone, i-Autel Robotics EVO II… kodwa angikayiboni ku-Amazon okwamanje.
Ukudalula: Ngisebenzisa amakhodi ami wokuhambisana womabili ama-DJI ne-Amazon ngaphakathi kwalesi sihloko.
Tags: i-autelama-autel robotics EVOama-autel robotics EVO 2điDJI MavicDroneizithombe ze-drone
Ungavumela kanjani futhi usebenzise i-WordPress yezithombe ezifakiwe
I-Acquia: Iyini Ipulatifomu Yedatha Yamakhasimende?